တယ်လီနောကို မရောင်းချဖို့အတွက် လက်မှတ်ထို းကန်ပိန်းပြုလုပ်နေ – PVTV Myanmar
တယ်လီနောကို မရောင်းချဖို့အတွက် လက်မှတ်ထို းကန်ပိန်းပြုလုပ်နေ
တယ်လီနောမြန်မာရဲ့ ရှယ်ရာတွေကို MI Group ထံသို့ မရောင်းချဖို့အတွက် လက်မှတ်ထိုးကန်ပိန်းပြုလုပ်ပြီး တားဆီးသွားမယ်လို့ Blood Money – သွေးစွန်းငွေ အဖွဲ့က ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။
အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုနဲ့ ဆက်နွယ်နေတဲ့ MI Group ထံကို တယ်လီနောသာ ရောက်သွားမယ်ဆိုရင် မြန်မာပြည်သူ ၁၈ သန်းကျော် ရဲ့ အသက်အန္တရာယ်နဲ့ လုံခြုံရေးကို စိုးရိမ်ရပါတယ်။
လက်မှတ်ထိုးကန်ပိန်းမှာ ပါဝင်လိုသူတွေအတွက် https://bit.ly/stop_telenor လင့်ကိုဝင်ပြီးတော့ လက်မှတ်ထိုးတောင်းဆိုရမှာ ပါ။ မှတ်ချက်ဆိုတဲ့နေရာမှာ Protect user data! No sale to genocide! Immediately stop the sale to the military-linked Investcom ဆိုပြီးရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။
လက်မှတ်အရေအတွက်ကို ၂ သိန်းအထိ သတ်မှတ်ထားပြီးတော့ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၃ ရက်ကို နောက်ဆုံးထားပြီး လက်မှတ်ထိုးတောင်း ဆိုထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
MI Group ဟာ လက်ဘနွန် အခြေစိုက် လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး လွတ်လပ်ခွင့်တွေကို အလေး မထား၊ လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ဖော်ခွင့်တွေကို အလေးမထားတဲ့ မှတ်တမ်းတွေနဲ့အတူ အကျင့်ပျက်ခြစားမှု မှတ်တမ်းတွေ၊ အာဏာရှင်တွေနဲ့ ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်မှု သမိုင်းကြောင်းတွေ ရှိထားပါတယ်။
လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဦးစီးဌာန CDM ဝန်ထမ်းများ ကိုယ်စားပြု ကော်မတီကို လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဦးစီးဌာန အဖြစ် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးလွင်ကိုလတ်အမိန့်နဲ့ ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်း
အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ ယာယီသမ္မတ ဒူဝါလရှီးလကလည်း နော်ဝေဝန်ကြီးချုပ်ထံကို စာရေးသားပြီး တယ်လီနောကုမ္ပဏီ က ရောင်းချမယ့်ကိစ္စကို တာဆီးပေးဖို့ တောင်းဆိုထားပါတယ်။
မုံရွာမြို့ရဲ့ တော်လှန်လူငယ်တွေက အကြမ်းဖက် စစ်တပ်ဆန့်ကျင်ရေး ဆန္ဒပြသပိတ်မှောက်
ပြည်သူလူထုကို တရားဥပဒေနဲ့အညီ ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်ရေးအတွက် “ပြည်သူ့ရဲတပ်ဖွဲ့” ကို NUG ယာယီသမ္မတ အမိန့်နဲ့ ဖွဲ့စည်း
2022-02-11 at 11:19 PM
ဆီးချိုတိုင်းစက်လေးကအမေမဆုံးခင် ဆရာဝန်ရဲ့ ညွှန်ကြားမှုနဲ့ ကျွန်တော်အဆင်မပြေတဲ့ကြားကဝယ်ခဲ့ရတာပါ အမေရုတ်တရက်ဆုံးသွားတော့ဒီစက်လေးကမသုံးဖြစ်ပဲ ပိုနေလို့ပါ ကျွန်တော်အမေ့အတွက် ၁လပြည့်ဆွမ်းလေးကို အမေနဲ့နေခဲ့တဲ့အခန်းကျဉ်းလေးထဲမှာပဲ အလှူလေးလုပ်ချင်လို့ပါ ကျွန်တော့်လက်ထဲမှာလည်း ပိုက်ဆံ၂သောင်းလောက်ပဲရှိလို့ ဒါလေးရောင်းရတဲ့ပိုက်ဆံနဲ့ ကျွန်တော်ရှိတာလေးပေါင်းပြီး အမေ့အတွက်အမျှလေးဝေပေးချင်လို့ပါ နေတာကတော့ မြောက်ဥကလာ ဌရပ်ကွက်မှာနေပါတယ်ဗျာ စက်နဲ့ စစ်တဲ့အပြားအရက်ပြန်တွေပါ အကုန်အပါကို ကျွန်တော်၅သောင်းကျော်ပေးဝယ်ခဲ့ပါတယ် ကျွန်တော်၄သောင်းလောက်ရရင်ရောင်းပါ့မယ်
ဖေဖော်ဝါရီ ၁၁ ရက် တိုက်ပွဲသတင်းများစုစည်းဖော်ပြမှု